ခေါက်ပရိဘောဂအလွန်သေးငယ်သောလသာဆောင် |အလှဆင် Bezzia
မာရီယာ vazquez | 07/01/2022 18:00 | လှည့်ကွက်အလှဆင်
အကျဉ်းချထားစဉ်အတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရှိ ပြင်ပနေရာတစ်ခုတွင် ပျော်မွေ့နိုင်သူများသည် အလွန်ကံကောင်းသည်ဟု ခံစားခဲ့ရသည်။ တောင်မှ အလွန်သေးငယ်သောလသာဆောင်များ ရတနာလေးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါနဲ့လား။ ခေါက်ပရိဘောဂ ဒါတွေက အိမ်ရဲ့ တိုးချဲ့မှုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အိမ်များ၏လသာဆောင်များ ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် သေးငယ်သော်လည်း ၎င်းတို့ကို အခွင့်ကောင်းယူရန် အတားအဆီးမဟုတ်ပါ။ နွေရာသီမှာ မနက်ခင်း ကော်ဖီသောက်ရင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ကူးကြည့်နိုင်မလား။ ညနေစာထိုင်ဖတ်နေလား? မင်းရဲ့အဖော်နဲ့ ညစာစားနေတာလား? ပရိဘောဂအနည်းငယ်ကို နေရာချထားခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ခေါက်ပရိဘောဂများသည် အလွန်သေးငယ်သော လသာဆောင်များကို အလှဆင်ရန် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါတွေက ယေဘူယျအားဖြင့် ပေါ့ပါးရုံသာမကဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း ခွင့်ပြုပါတယ်။ space ကို အလွယ်တကူ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။ လိုအပ်တဲ့အခါ။ ခေါက်ထားသောနေရာသည် အခြားနည်းဖြင့် သုံးနိုင်စေမည့် နေရာအနည်းငယ်သာ ယူပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီပရိဘောဂအမျိုးအစားရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အားသာချက်တွေက အောက်မှာ သင်ရှာတွေ့နိုင်သလောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
၎င်းတို့သည် ပေါ့ပါးသော ပရိဘောဂများဖြစ်သည်။; ၎င်းတို့သည် အလေးချိန်အနည်းငယ်သာရှိပြီး အမြင်အာရုံအားဖြင့် နေရာအနည်းငယ်ယူသည်။
ခေါက်သိမ်းလို့ရတယ်။ အာကာသကို အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ဆောင်းရာသီအတွက် ရိုးရှင်းစွာ ပြင်ဆင်ပါ။
လသာဆောင်မှာ ဘယ်ခေါက် ပရိဘောဂတွေက မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသလဲ။ လူတစ်ဦးစီ သို့မဟုတ် မိသားစုတစ်ခုစီ၏ လိုအပ်ချက်များသည် ကွဲပြားသော်လည်း လသာဆောင်၏လမ်းတွင် ခဲယဉ်းသော ပရိဘောဂနှစ်ပိုင်းရှိပါသည်။ ကျနော်တို့က သင်တန်းအကြောင်းပြောတာပါ။ စားပွဲနှင့်ကုလားထိုင်များ။
una ခေါက်စားပွဲဝိုင်း ၎င်းသည် အမြဲကြိုဆိုသော ထပ်လောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့... အနည်းဆုံး ကုလားထိုင်နှစ်လုံးမပါဘဲ စားပွဲတစ်လုံးကို ဝိုင်းထားရတာ ဘာသဘောလဲ။ ဤအမျိုးအစားအစုံသည် နိုင်ငံခြားတွင် မြောက်မြားစွာသော လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်- ကော်ဖီသောက်၊ စား၊ စာဖတ်၊ အလုပ်... နှင့် အခြားသူနှင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင့်တွင် နေရာအလွန်နည်းပါသလား။ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးလောင်း စက်ဝိုင်းပုံဇယား လက်ရန်း သို့မဟုတ် နံရံတွင် ချိတ်နိုင်ပြီး လသာဆောင်၏ဘေးဘက်ရှိ ခုံတန်းရှည်ဖြင့် ကုလားထိုင်များကို အစားထိုးနိုင်သည်။ ကုလားထိုင် နှစ်လုံး မပါပေမယ့် လူနှစ်ယောက် ဆံ့နိုင်တဲ့ ခုံတန်းရှည် တစ်လုံး။ ထောင့်မှန်စတုဂံ စားပွဲတင်နိုင်ပါသလား။ သင့်လသာဆောင်၏နေရာလွတ်သည် ၎င်းကိုခွင့်ပြုပြီး အပြင်တွင် စားသောက်နိုင်မှုသည် သင့်အတွက် ဦးစားပေးဖြစ်ပါက မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ပြင်ပနေရာများအတွက် သင့်လျော်သောပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စားပွဲနှင့် ကုလားထိုင်များကို လောင်းကစားပါ။ ကောင်းစွာပံ့ပိုးပေးသောပစ္စည်းများ ရာသီဥတု မသာယာ သံမဏိ၊ ဓာတုအမျှင်များ သို့မဟုတ် ကျွန်းကဲ့သို့သော အပူပိုင်းသစ်တောများ။
Un workbench သို့မဟုတ် သိုလှောင်မှုဖြင့် ကင်းလွတ်ခွင့် သူတို့က လသာဆောင်မှာ ဘယ်တော့မှ လွန်လွန်းတယ်။ ခုံတန်းများပေါ်တွင် ဤကဲ့သို့ နေရာယူထားသော ကုလားထိုင်များထက် လူများများထိုင်နိုင်သည်။ နံရံမှာ ကပ်ပြီး ဖျာတွေ ချထားရင် နေ့စဥ်အချိန်မရွေး အနားယူနိုင်ပါတယ်။
အိပ်ဖို့နဲ့ အပန်းဖြေဖို့ ဦးစားပေးသင့်သလား။ ဒါဆို ဖိုဖာအတွက် နေရာမရှိရင် စားပွဲနဲ့ ကုလားထိုင်တွေကို မေ့ထားဖို့ ပိုကြိုက်မယ်ထင်တယ်။ ထောင့်ဆိုဖာတစ်ခုသွားကာ အစုံလိုက်နှင့် ခေါက်ကော်ဖီစားပွဲ။ ကော်ဖီသောက်ရန် သို့မဟုတ် ပေါ့ပါးသော သရေစာ ညစာ ကျွေးပါမည်။
နေရာလပ်ကို ပိုမိုကြိုဆိုလိုပါသလား။ သင့်လသာဆောင်၏ကြမ်းပြင်ကို မကြိုက်ပါက သို့မဟုတ် အခြေအနေမကောင်းပါက၊ အဘယ်ကြောင့် မထည့်သွင်းသင့်သနည်း။ patterned ပလပ်ဖောင်း? သူတို့ကနေရာရရန်အလွန်လွယ်ကူသည်; ရိုးရှင်းသောကလစ်အနည်းငယ်မျှသာ။ သင်၏လသာဆောင်သည် အလွန်သေးငယ်ပါက၊ ကုန်ကျစရိတ်သည် တဟုန်ထိုးတက်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် ယူရို ၁၆ မှ ယူရို ၂၃ ကြားရှိသည်။ ဒါ့အပြင် အထည်အလိပ်တွေက သင့်ကို နွေးထွေးမှုပေးပါလိမ့်မယ်။
မမေ့ပါနှင့် အပင်အချို့ကို ပေါင်းစပ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် လသာဆောင်သို့ လန်းဆန်းမှုနှင့် အရောင်ကို ဆောင်ကြဉ်းပေးသည်။ နောက်ပြီး သင်ဘယ်အပင်ကိုရွေးချယ်ပြီး ဘယ်နေရာမှာထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီး သူတို့ဟာ သင့်ကိုပိုပြီး privacy ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ နေရာအများကြီးမခိုးရအောင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးနေနိုင်ပြီး အရွယ်အစားကြီးကြီးမားမားမရှိသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းသောနမူနာများကို လောင်းကြေးထပ်ပါ။
ခေါက်ပရိဘောဂများဖြင့် အလွန်သေးငယ်သော လသာဆောင်များကို အလှဆင်ခြင်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး စျေးမကြီးပါ။ အချို့ကိုကြည့်ပါ၊ နွေဦးရာသီမရောက်လာမီ ၎င်းကို တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအသုံးချရန် သင့်လသာဆောင်ကို ပြင်ဆင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း » လှည့်ကွက်အလှဆင် » အလွန်သေးငယ်သောလသာဆောင်ကိုအလှဆင်ရန်ခေါက်ပရိဘောဂ
ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ကုသရန် သဘာဝဆေး ၄ မျိုး